Hargeysa (TNN) :– Xaaladda Somaliland ee xannuunka Coronavirus ayaa laga dayriyay, iyadoo aannay jirin warbixino la xidhiidha xaaladda xanuunka ee xilligan Somaliland iyo heerka uu marayo.
Wargeyska caanka ah ee New York Times, ayaa warbixin la xidhiidha arrinta xannuunka COVID_19, ka qor ay Somaliland, wuxuuna daabacay warbixin uu kaga hadlayo Cusbitaalka kali ah ee Hargeysa lagu dabiibo dadka uu asiibo xannuunka Coronavirus.
“Qiyaas ahaan 80% bukaanada laga helo Covid_19 ee Cusbitaalka Guud ee Hargeysa u soo gudbiyo Darye el Hospital nooma yimaaddaan, guryahooda ayay dadku ku dhintaan.” Sidaa waxa Wargeyska New York Ti mes u sheegay Dr. Yusuf M. Ahmed oo ka hawl gala Daryeel Hospital.
Wuxuu intaa raaciyay in xannuunka Coronavirus dadka aamusnaan ku laayay, iyadoo bukaanadu ku dhima nayaan guryahooda sida uu sheegay, “Hadda, Fayrasku Dadka aamusnaan buu ku laynayaa..” ayuu sheeg ay Dhakhtarka la hadlay Wargeysku.
Randa Hassan Mohamed oo ah Kalkaaliso Caafimaad oo ka shaqaysa Daryeel Hospital Hargeysa ayaa Buka an qabay Covid_19, dibedda uga saartay Cusbitaalka, iyadoo ka saartay qolkii uu jiifay, si uu u helo Hawa da dabiiciga ah iyo cadceedda, taasi oo qayb ka ah dedaallada lagu samato-bixinayo Dadka Xanuunkaasi ku haleelo gudaha Somaliland.
Wargeysku waxa kale oo uu soo hadal-qaaday Tacsida badan ee Bogagga Baraha Bulshada daadsan, taasi oo uu tilmaan uga dhigayo tiro badnida Geerida “Covid_19 wuxuu la soo laabtay Aar-gudasho..” ayuu shee gay Wargeyska oo soo xiganaya Dadka uu waraystay.